Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Croatian Nikola Vlasic Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nikola Vlasic Biography anyị na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Venera Milin na Josko Vlasic), ezinụlọ, nwunye (Ana), na nwanne nwanyị ama ama (Blanka Vlašić). Karịa nke a, ụmụnne ndị ọzọ Nikola (Luka, Marin - ụmụnne ya), Ndụ nkeonwe, ibi ndụ, yana ọnụ ahịa net, wdg.
Na nkenke, ihe ncheta a na -akọwa akụkọ ndụ nke Nikola Vlasic, onye na -eme egwuregwu nke nwere amamihe na onye sitere na ezinụlọ egwuregwu na -aga nke ọma. Nke a bụ akụkọ nwata nwoke ji ama ama nna ya na nwanne ya nwanyị n'ụwa niile iji mee ka ọ nwee ihe ịga nke ọma dị ka onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara.
Iji mee ka akụkọ ndụ gị na -atọ gị ụtọ maka ụdị Nikola Vlasic's Bio, anyị lere anya na ọ dabara adaba igosi gị ebe ngosipụta nke ndụ ya mbụ na ihe ịga nke ọma n'ọrụ. Lee, nchịkọta njem njem ndụ onye Croatia.
Nikola Vlasic Biography - Lee ndụ nwata ya na ihe ịga nke ọma.
Enweghị ajụjụ, Nikola nwere ihe Kevin De Bruyne na Bruno Fernandes enwetala ike nke ime egwuregwu etiti ha. Baller bụ onye na-egwu ọkpọ na igbe na-akwụ ụgwọ ozugbo, nwere ike ibuso ndị na-agbachitere ya agha ma tọọ ụda egwuregwu bọọlụ ọ bụla.
N'agbanyeghị ọtụtụ otuto gbara aha ya gburugburu, anyị na -achọpụta na ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole agụọla nkenke Nikola Vlasic's Biography. N'ihi nke ahụ, anyị mere ya maka gị. N'atụfughị ​​oge gị, ka anyị kọọrọ gị akụkọ ya.
Akụkọ Nikola Vlasic Childhood:
Maka ndị mbido Biography, ọ na -ebu aha otutu - Niksi. A mụrụ Nikola Vlašić n'ụbọchị 4th nke October 1997 nne ya, Venera Milin na nna, Josko Vlasic, n'obodo Split, Croatia.
Onye na-agba bọọlụ na-awakpo bịara n'ụwa dị ka nwa ikpeazụ (nke a na-akpọkwa nwa ụlọ), n'etiti ụmụ anọ nke papa ya na mama ya. Nwanne Nikola Vlasic niile bụ mkpụrụ nke alụmdi na nwunye na -atọ ụtọ n'etiti nne na nna ya (Venera na Josko).
Zute nne na nna Nikola Vlasic-nne ya mara mma, Venera Milin na nna mara mma, Josko Vlasic.
Nikola Vlasic nọrọ ụbọchị nwata ya na ụmụnne atọ tọrọ ya, bụ ndị dịkarịa ala afọ anọ. Nwa mbụ nke Venera na Josko bụ Blanka Vlasic (amụrụ na 1983). Marin Vlasic, nwa nwoke nke mbụ na -esote. Nwa nke atọ (nwanne nwoke nke okenye Nikola) bụ Luka Vlasic.
Nikola tolitere na -achọpụta aha ezinụlọ Vlasic ya bụ ihe ama ama - ọ bụghị naanị ndị Croatia mana ụwa n'ozuzu ya. Na -akwado nna ya (Josko Vlasic), nwanne ya nwanyị nke okenye (Blanka) nwere ama n'ụwa niile n'egwuregwu. Ọ bụ onye ama ama nwere ihe ndekọ ụwa na elu elu.
Ncheta kachasị mma nke ụbọchị nwata ya:
N'etiti ọtụtụ, Nikola nwere ihe ncheta nwata abụọ kacha atọ ụtọ. Nke mbu, ọ bụ oge a na -agaghị echefu echefu na mmetụta mpako nke ikiri nnukwu nwanne ya nwanyị (Blanka Vlasic) na -emeri ma na -eme ememe ndekọ elu ụwa ya dị elu.
Nke a bụ Nikola Vlašić na -ekiri nwanne ya nwanyị nke okenye, Blanka. Ọ bụ oge akọwapụtara nke o meriri nrite ọla edo na Asọmpi egwuregwu mba ụwa na Osaka (afọ 2007).
Ugbu a, ebe a bụ vidiyo nke oge obi ụtọ Blanka Vlasic mere ndekọ ahụ Jump Jump, ihe ngosi mere ezinụlọ Vlasic ji nwee nganga maka mmeri egwuregwu ha.
Akụkụ nke abụọ nke ncheta Nikola Vlasic nwata bụ oge mara mma ọ nọdụrụ n'oche - n'ime ụlọ ezinaụlọ ya, na -ekiri ihe nrite ọla edo nwanne ya nwanyị niile. N'ebe a, obere Niksi gwara onwe ya - na otu ụbọchị, ya onwe ya ga -emekwa ka ndị mụrụ ya dị mpako.
Nikola Vlasic n'oge ọ bụ nwata. Nrite nke nwanne ya nwanyị meriri (Blanka Vlasic) kpaliri ihe ịga nke ọma ya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'oge a, Nikola (site na mbọ nna ya) enweworị mmasị na football. Ọ dịtụghị ihe dị ka ọrịa umengwụ ikpeazụ a mụrụ.
Mgbe ọ bụ nwata, Nikola na nwanne ya nwanyị ukwu na -agbakarị bọọlụ (onye egwuregwu bọọlụ Croatian wee jụ onye na -ejide ihe ndekọ ụwa na elu elu). Nwata nwoke ahụ gosipụtara nkwenye siri ike ime ya - n'oge ọ bụ nwata.
Little Nikola na Blanka na -egwu bọọlụ.
Ezinụlọ Nikola Vlasic:
Mgbe ị na -eche maka otu n'ime ụlọ egwuregwu kacha ukwuu n'obodo Split nke Croatia, ọ ga -esiri gị ike ịgafe aha abụọ n'ekwughị ezinụlọ Vlasic. Gwa eziokwu, Egwuregwu amaliteghị site na nwanne Nikola nke tọrọ ya mana nna ya na nne ya.
A mụrụ onye egwuregwu bọọlụ Croatian (Nikola Vlasic) na ezinụlọ onye bụbu onye na-eme egwuregwu ski Venera Milin (nne ya) na nna nkuzi egwuregwu, Josko Vlasic. Super Dad bụ onye gụsịrị akwụkwọ n'egwuregwu egwuregwu na ngalaba nke ọdịbendị anụ ahụ na Zagreb.
Josko Vlasic rụrụ ọrụ dị ka onye nchịkwa maka ASK Split (otu egwuregwu), wee bụrụ onye nkuzi nkuzi mmega ahụ n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ elementrị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Croatian. Ọnọdụ niile nke ebe ọrụ ya dị na Split, obodo nke abụọ kachasị na Croatia.
Onye na -agba bọọlụ na -awakpo bụ onye mba Croatia. Nikola bụkwa onye sitere na agbụrụ Slavic nke mba ahụ, nke sitere na Croatia n'akụkụ akụkụ Bosnia na Herzegovina (obodo nke Edin Dzeko).
Ọ dị mkpa ịmara na nne na nna Nikola Vlasic (Venera Milin na Josko Vlasic) sitere n'akụkụ abụọ dị na Croatia. Papa ya si Dubrava, na mpaghara Zagreb. N'aka nke ọzọ, mama Nikola Vlasic (Venera Milin) ​​sitere na Jezera - obodo Croatia dị anya.
Nne na nna Nikola Vlasic sitere n'akụkụ abụọ nke Croatia - Dubrava na Jezera.
Nikola Vlasic Education and Buildup Ọrụ:
Dị ka ezinụlọ egwuregwu na -eme nke ọma na ama ama, enwere atụmanya - dị ka mkpa ịga n'ihu n'ihe nketa ezinụlọ Vlasic. N'ihi ya, nne na nna Nikola Vlasic (Venera na Josko) na mbido, tụlere echiche ịdebanye aha ya na mmemme egwuregwu bọọlụ.
N'ịkwado ịga ụlọ akwụkwọ, Nikola nwetara ọzụzụ mbụ ya - na egwuregwu bọọlụ - ọ bụghị onye ọzọ karịa nna ya na -agbanwe agbanwe. N'afọ 2002, nna ya, Joško Vlašić kpebiri na Niksi, dị ka aha ezinụlọ ya na -akpọ ya, ga -elekwasị anya oge ya niile - n'ọchịchọ ịghọ ọkaibe n'ịgba bọọlụ.
Ná mmalite, Joško Vlašić zụrụ nwa ya nwoke n'onwe ya. Ka oge na -aga, ọ rịọrọ ndụmọdụ site na mbubreyo Tomislav Ivić, onye njikwa Croatian onye nyere ndụmọdụ na Zoran Vulić, onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ Croatian.
Ruo ọtụtụ oge ọ bụ nwata, Zoran Vulić zụrụ Nikola n'otu n'otu. N'ikpeazụ, ọ malitere ọrụ ya na Dalmatinac. Iji nyere ya aka inweta ihe kachasị mma, Josko Vlasic (nna ya) kwadoro nwa ya nwoke ka ọ sonyere Omladinac Vranjic, agụmakwụkwọ football sitere na Vranjic, na nso Split, Croatia.
Echiche nke ime ihe n'usoro dị mfe. Ọ bụ ịhụ ka a na-etolite nwa ya nwoke (amamihe dị na ya) na onyinyo ya Mario Mandžukić - igwe ihe mgbaru ọsọ nke, dịka ọ dị n'oge ahụ, bụ akụkọ na Dinamo Zagreb.
Nikola Vlasic Football Akụkọ:
Niksi na -eto eto bụ ezigbo mmetụta egwuregwu bọọlụ ụmụaka - n'oge ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Omladinac Vranjic gbara bọọlụ. N'ihe dị ka 2006 (afọ 8), vidiyo nke ya abanyelarị na YouTube. Lelee obere Nikola ka ọ na-eme ihe ịtụnanya dịka nwata dị afọ 8.
Mgbe oge ịga nke ọma anọ ya na omladinac Vranjic academy, onye dị afọ iri na abụọ sonyeere Hajduk Split, ebe njem kacha mma iji bụrụ ọkachamara malitere.
Nikola mere nke ọma na ọkwa klọb ndị ntorobịa, yana ihe kachasị mma nke ụbọchị agụmakwụkwọ Hajduk Split ya bịara naanị otu afọ tupu ngụsị akwụkwọ. O mere ya na ezigbo enyi nwata ya.
N’oge 2013 -2014 ahụ, nwata ahụ hiwere otu onye otu ibe ya, Andrija Balić ka ya na ya nwee mmekọrịta dị ike. Mkpakọrịta a wetara Hajduk Split nke ọma. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ụmụ nwoke abụọ a na -egwu egwu kemgbe ha bụ nwata.
Andrija Balić na Nikola Vlasic - ezigbo enyi Hajduk Split.
Ụmụ nwoke abụọ ahụ nyeere ndị otu ha aka imecha nke mbụ - na ọkara mbụ nke otu oge, na -enweghị otu mfu. Dị ka ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike, Andrija Balić na Nikola Vlasic (gụnyere ndị otu egwuregwu) nwetara onwe ha nkwekọrịta ọkachamara.
Mmalite Ndụ na Senior Football:
Nikola Vlasic malitere ndụ ọrụ aka ọrụ ya na ndetu mara mma. Maka ọ joyụ nke nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya, kpakpando na -eto eto gbabatara na mpụta mbụ ya - na asọmpi ntozu UEFA Europa megide Dundalk.
Site na akara na mpụta mbụ ya, Nikola mebiri ndekọ ka ọ bụrụ Hajduk Split nke kacha nta akara asọmpi mba ụwa, mgbe ọ dị afọ 16 na ọnwa 9. Ihe ịga nke ọma nwata ahụ akwụsịghị ebe ahụ dị ka oge ahụ, Vlašić gbara ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ.
Ọnọdụ onye ndu:
N'ụbọchị 30th nke June 2016, oge abụọ ka ọ ghọrọ pro, nwata ahụ nwetara onwe ya onye osote onye isi oche maka klọb ya.
Ọbụlagodi mgbe onye isi otu ya (Kalinić) na -anọghị maka UEFA Euro 2016, Nikola Vlašić na -eto eto (mgbe ọ dị afọ 19) weere uwe mwụda. Ọ bụ onye isi Hajduk Split - na -eduga ha na mmeri dị mkpa.
Nikola Vlasic Biography - Ụzọ ama ama Akụkọ:
Àgwà idu ndú o nwere, yana arụmọrụ ya, mere ya ihe nnyefe ọkụ. O nwetara Nikola Vlasic ebe n'ime akwụkwọ ndị egwuregwu bọọlụ si Everton. Otu oge mgbe Euro 2016 gasịrị, ndị Toffees bịanyere aka na ya na nkwekọrịta afọ ise.
Soro Hajduk Split lelee ụbọchị ebube Nikola Vlasic. Ndị a bụ ngosipụta ndị mere ka Everton kwenye ịbanye ya.
Ego Everton nwetara site na ire ya John nkume, Romelu Lukaku, Ross Barkley so na ndị ejiri azụta Nikola Vlasic. Aha ukwu ndị ọzọ bịarutere Everton n'oge ahụ gụnyere; Gylfi Sigurdsson, Jordan Pickford, Theo Walcott, Michael Keane na Chenk Tosun.
N'ụzọ na -emegide onwe ya, Everton chere klọb ochie Nikola Vlasic (Hajduk Split) n'afọ mbụ ya na ha nọ. Nwa nwoke ahụ (19) nwere ọtụtụ ihe ọ ga -egosi n'oge ahụ. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na egwuregwu egwuregwu ya masịrị Everton Boss, Ronald Koeman na onye isi egwuregwu bọọlụ Steve Walsh.
Vlašić gara n'ihu na -agbasi mbọ ike ịmasị onye isi ya - ọbụlagodi akara na mpụta mbụ ya n'ụlọ Toffees - Goodison Park. Lee ihe mgbaru ọsọ mbụ ya na uwe elu Everton.
Ọjụjụ Marco Silva:
Mgbanwe nke 2018/2019 na njikwa Everton wetara onye njikwa Portuguese, onye nwere echiche nke uto ya. Atụmatụ Marco Silva gbadoro ụkwụ n'inweta na iji ọkacha mmasị nke ya, ya bụ; André Gomes, Ademola Lookman, na Richarlison.
Mgbe Marco Silva tụlere Wayne Rooney dị ka agadi maka mmasị ya, Nikola Vlasic, n'aka nke ọzọ, akpọrọ ya ka ọ bụghị ụdị onye ọkpọ egwuregwu na -akpasu iwe.
Marco Silva enyeghị ndị ogbenye Croat oge zuru oke iji gosipụta onwe ya. Kama, o mere atụmatụ ịkwanye Nikola na mbinye ego. Ọ were mgbalị Wayne Rooney ịkasi ndị Everton jụrụ - na -eme Nikola kwenyere na olileanya dị n'ihu.
Nikola Vlasic Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
Ọ na -esiri onye na -eto eto ike ịnagide eziokwu nke ịjụ Everton - klọb ọ hụrụ n'anya. Mgbe ekwusịrị ka ọ bụrụ njupụta maka ihe achọrọ, Nikola Vlasic kpebiri na ọ ga -ahapụ England - na nrọ ịlaghachi otu ụbọchị - iji gosipụta uru ya.
Na 31 Ọgọstụ 2018, onye egwuregwu bọọlụ Croatia sonyeere ọgbakọ CSKA Moscow nke Russia - site na mbinye ego. N'iburu atụmatụ ọhụrụ n'uche, ebumnuche Nikola bụ iji isi Champions League gosipụta onwe ya - nke o mere n'ụdị ejiji.
Na mbido Champions League ya na 19 Septemba 2018, o nyere goolu abụọ aka CSKA Moscow. Mmetụta ahụ akwụsịghị ebe ahụ. Nikola Vlasic mere nnukwu nkwupụta ọzọ site na ị nweta naanị otu ihe mgbaru ọsọ meriri Real Madrid Pụrụ Ime Ihe Niile-na mmeri CSKA 1-0.
Afọ juru ya n'ihe omume ya - gụnyere enyemaka mara mma Andrej Kramaric mgbe nọ na Nọvemba 2018 ọrụ mba, CSKA gọziri Vlašić na nkwekọrịta na -adịgide adịgide. Site na nkwekọrịta ọhụrụ ahụ bịara atụmanya buru ibu na Nikola nọgidere na -emegide nsogbu niile dị n'ụzọ ya.
Ebe ọ bụ na ọ dị mma, klọb ndị kacha elu na Europe (dị ka Napoli, Atlanta, wdg) bịara na -achọ Nikola Vlašić. N'agbanyeghị nnukwu nrụgide, CSKA jụrụ ire ere ahụ dị oke ọnụ ahịa.
Disemba 2020 bụ mgbe Nikola Vlašić kwetara na o mezuola ozi ya na Russia, yabụ na ọ dị mkpa ịga n'ihu. Mkpebi ahụ mgbe ọ nwetara otuto; Russian Premier League, Russian Football Union na Sport Express Footballer of the Year. Nikola meriri ihe ndị a niile n'afọ 2020.
Ebe CSKA Moscow ka siri ọnwụ ire ya, mmekọrịta dị n'etiti ya na klọb Russia dara. N'oge na -adịghị anya, CSKA Moscow nyere iwu, nke ahụ manyekwara nnukwu onye egwuregwu bọọlụ Russia itinye akara ngosi dị mma na onye ọkpọ bọọlụ nnupụisi ha.
N'ụbọchị 31st nke Ọgọst 2021, David Moyes ' West Ham mechiri nkwekọrịta Nikola Vlasic - n'ụgwọ a kọrọ na ọ ruru nde £ 25. Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Croatia si kwuo, ego ahụ mere Nikola ka ọ bụrụ nnyefe nke anọ kachasị ọnụ nke onye ọkpụkpọ Croatian na akụkọ egwuregwu bọọlụ.
N'oge edere Nikola Vlasic's Biography, ọ na -efezi elu na agba West Ham - na -enwe olileanya ime nkwupụta ka ukwuu na England. N'agbanyeghị nke ahụ, naanị 23 (dịka nke 2021), nwa Josko Vlasic na Venera Milin ka nwere ihe ndị ọzọ ga -enyocha. Akụkọ ndụ ya ndị ọzọ bụ akụkọ ugbu a.
Banyere nwunye Nikola Vlasic - Ana:
Ruo ogologo oge ugbu a, ekwupụtala Croat. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Nikola Vlasic abụghị otu. Ọ nọ na mmekọrịta ịhụnanya maka ndụ ya - Ana - ọbụlagodi tupu ụbọchị mmalite Premier ya na Everton.
Dabere na Jutarnji, Nikola na Ana malitere ịlụ n'afọ 2016 - obere oge ka ya na Hajduk Split bidoro ịgba bọọlụ ọkachamara. Ọ kwadola ya oge niile n'agbanyeghị na ọ pụtara ịkwaga agụmakwụkwọ ya na Russia - mgbe enyi ya nwoke hapụrụ Everton.
Mgbe ya na nwoke gbara afọ ise, nwa nwoke hụrụ ya n'anya - Nikola - kpebiri na ọ ga -ajụ ajụjụ ahụ. Ana ji ọ saidụ zaa ee, ndị enyi abụọ ahụ chọkwara ngọzi alụmdi na nwunye n'aka ndị mụrụ ha. Ihe na -esote bụ nkwadebe maka nnukwu ihe omume ahụ.
Agbamakwụkwọ nke Nikola na Ana.
Mgbe asọmpi Russia nke 2021, Nikola na Ana (iji kwadebe maka agbamakwụkwọ ha) laghachiri n'ala nna ha, Split.
Ndị hụrụ ha n'anya lụrụ (na Mee 2021) na gburugburu nne na nna ha, ụmụnne ha, ndị ikwu ezinụlọ na ezigbo ndị enyi. Alụmdi na nwunye ha mere na St. Lawrence's Church na Split, Croatia.
Nikola na Anna na -ama mma ọnụ - n'ụbọchị agbamakwụkwọ ha.
Nwunye Nikola Vlasic (Ana) na nwa ha dị arọ n'oge agbamakwụkwọ ha. Amụrụ nwa ahụ n'etiti etiti 2021-n'oge di ya nọchiri anya Croatia na asọmpi European 2020.
Ana Vlasic dị arọ na nwatakịrị n'oge agbamakwụkwọ ya na 2021.
Nikola Vlasic Ndụ nkeonwe:
Site n'ọhịa, onye ọkpọ egwuregwu na -eme mmega ahụ pụrụ iche maka ndị egwuregwu bọọlụ. Mgbe ụfọdụ anyị na -eche… ma ọ bụrụ na ụta na akụ bụ ezigbo mgbatị ahụ? Ọ dị mma,… Nikola Vlašić nwere ike dị na vidiyo a na -enyere aka ịkọwa nke ahụ. Lelee usoro mgbatị ahụ ya dị ịtụnanya.
Ndụ Nikola Vlasic:
Ibi ndụ ahụike dị ka ndị egwuregwu na -ewe ọtụtụ oge na mbọ. N'ihi ya, ibute ahụike ụzọ site na ibi ndụ na -eji ọrụ n'aka bụ ihe kacha mkpa maka Nikola. Site na nnukwu nkwado nna ya, ọ dịịrị Vlasic mfe ịbanye n'ụgbọ ala ya mgbe ụbọchị siri ike nke mkparịta ụka mbufe gasịrị.
Ụgbọ ala Nikola Vlasic.
Ndụ Ezinụlọ Nikola Vlasic:
Naanị ihe ka mma karịa ndị egwuregwu bọọlụ bụ inwe ezinụlọ egwuregwu. Na ezinụlọ Nikola Vlasic erutela n'ọkwa egwuregwu stardom - ekele niile maka mmeri ha nwetara n'egwuregwu dị iche iche. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị gbasara nna ya, nne ya na ụmụnne ya ndị okenye.
Banyere Nikola Vlasic Nna:
A mụrụ Joško n'afọ 1956 na Split. Ọ malitere dị ka nwa akwụkwọ egwuregwu na ASK Split, klọb Croatian maka ndị na -eme egwuregwu. Mgbe ọ hụrụ ikike pụrụ iche ya, onye nkuzi mbụ ya, Ante Tešija chere na Joško ga -eme nke ọma na decathlon, ebe ọ kọwara ya dị ka "ogologo na akpụkpọ anụ".
Dị ka Wikipedia si tinye ya, decathlon bụ egwuregwu egwuregwu jikọtara na egwuregwu nke gụnyere ihe omume iri na egwuregwu. Joško na mbụ ekwenyeghị na isonye n'egwuregwu ahụ. Yabụ, n'ihi inwe ndidi ya, ọ nọgidere na -enwe obi ike, nsonaazụ ya wee bịa ngwa ngwa.
N'afọ ndị sochirinụ, Joško Vlašić ghọrọ onye isi Yugoslav decathlete, na -emeri asọmpi mba ise n'usoro, site na 1979 ruo 1983. N'afọ ahụ 1983, nna Nikola Vlasic mebiri ndekọ steeti na egwuregwu decathlon - (isi 7659).
Nna mpako meriri nzere decathlon abụọ n'egwuregwu Mediterenian na -aga n'ihu: ọla kọpa na 1979 yana ihe nrite ọla edo ya na 1983. N'ezie, ihe kachasị mma nke Joško Vlašić decathlon nke 7659, nke edobere na Izmir na June 1983, ka bụ ndekọ Croatia.
Mgbe ọ lara ezumike nká, nna dị mpako banyere n'ịzụ nwa ya nwanyị na Long jump. Joško were onwe ya n'ọrụ dị ka naanị onye nkuzi nwa ya nwanyị Blanka Vlašić. Lee Super Dad Joško na nwa ya nwanyị, onye mechara bụrụ onye mmeri ụwa na elu elu.
Joško Vlašić na nwa ya nwanyị, Blanka.
Banyere mama Nikola Vlasic:
Venera Milin kacha mara amara dị ka nwunye Joško, otu n'ime ụmụ nwoke kacha asọpụrụ na egwuregwu Croatia. Dị ka di ya, ọ bụkwa onye na -eme egwuregwu (ugbu a lara ezumike nká). Venera tupu ezumike nká na-eme egwuregwu ịgba ski obodo. O mechara banye bọọlụ aka na egwuregwu.
Venera Milin na nwa ya nwanyị, Blanka na -ekpori ndụ.
Banyere Blanka Vlašić - Nwanyị Nikola Vlasic:
Amụrụ na afọ 1983, nne na nna ya (Venera na Joško) kpọrọ ya aha Casablanca, obodo nnabata nke egwuregwu 1983. A mụrụ Blanka Vlašić n'oge egwuregwu Mediterenian - nke hụrụ nna ya na -eme egwuregwu a ma ama na -emeri ihe nrite ọla edo.
Nke a bụ Blanka Vlašić - Nwanyị Nikola Vlasic.
Ọ malitere ịgbaso nzọụkwụ nne na nna ya n'oge ọ bụ nwata. Blanka nwara ọtụtụ egwuregwu, dị ka tenis, volleyball na basketball. N'ikpeazụ, ọ kwagara elu elu elu - mgbe ya na papa ya kparịtachara.
Dị ka onye na -amali elu, Blanka meriri ọtụtụ nrite - na -eme ya akụkọ mgbe ochie. Nwanne nwanyị Nikola Vlasic bụ onye mmeri nke Europe, onye mmeri ụwa abụọ nke ụwa, onye mmeri ime ụlọ ụwa abụọ, onye nrite ọla ọcha nke Olympic, na onye mmeri obere ụwa abụọ. Papa Joško nke Blanka, ka bụ nnukwu akụ ya.
Banyere ụmụnne Nikola Vlasic - Marin na Luka:
Ụmụnne abụọ ndị tọrọ atọ dị afọ isii. Marin Vlasic bụ nwa nwoke mbụ nke ezinụlọ. Amụrụ ya n'afọ 1986 mere ka ọ tọrọ Blanka afọ atọ na afọ 11 karịa Nikola. A mụrụ Luka Vlasic (nwa nwoke nke abụọ Joško) n'afọ 1992.
Ma Marin na Luka (nke dị n'okpuru) ahụbeghị nnukwu ihe ịga nke ọma na ama ama n'ụwa niile dịka Blanka na Nikola - ezinụlọ abụọ na -akpa afọ ezinụlọ.
Foto ezinụlọ Nikola Vlasic - na -egosi ụmụnne ya ndị okenye Marin na Luka. Ọ dị obere - n'oge ahụ.
Nikola Vlasic Eziokwu efu:
Ịchịkọta akụkọ ndụ a, anyị ga -eji ngalaba ikpeazụ a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Croatia. Ugbu a, ka amalite.
Eziokwu nke 1 - Nikola Vlasic Salary Breakdown:
West Ham United mechiri nkwekọrịta ịkwụ ya £ 70,000 kwa izu. Chọta ebe a, ndakpọ ụgwọ ọnwa Nikola Vlasic na Pound sterling na nwa amaala Croatian kuna.
Nikola Vlašić nwetara na Pound Sterling (£).
Nikola Vlašić nwetara na Croatian Kuna (HRK)
Kwa Afọ: £ 3,645,600 32,295,141 NKK
Ọnwa kwa: £ 303,800 2,691,261 NKK
Kwa Izu: £ 70,000 620,106 NKK
Kwa :bọchị: £ 10,000 88,586 NKK
Oge Awa ọ bụla: £ 416 3,691 NKK
Nkeji ọ bụla: £ 6.9 61 NKK
Sekọnd ọ bụla: £ 0.12 1.0 NKK
Kemgbe ị malitere ilele Nikola Vlasic'Bio, nke a bụ ihe o nwetara na West Ham.
Otu onye na -arụ ọrụ na Croatia na -enwetakarị 204,001 HRK kwa afọ. N'ihi ya, ọ ga -ewe afọ iri na atọ ka nwa amaala dị otu a nweta ụgwọ ọnwa Nikola Vlasic na West Ham.
Eziokwu nke abụọ - Blanka Vlasic Height Difference with Nikola:
Nwanne ya nwanyị, onye mmeri ụwa ugboro abụọ na onye nrite Olympic ugboro abụọ guzoro na elu mita 1.93. N'aka nke ọzọ, Nikola guzo na mita 1.78. O nwere elu nke 5 ụkwụ 10 sentimita asatọ mgbe Blanka (nwanne ya nwanyị nke okenye) bụ 6 ụkwụ 3 sentimita.
Eziokwu nke 3 - Nkwado Luka Modric:
Nikola Vlasic, na post Instagram nke edepụtara na Disemba 5th 2018 ghọtara Lionel Messi na Cristiano Ronaldo dị ka ọdụm abụọ nke bọọlụ furu okpueze kacha mma n'ụwa Luka Modric.
A nabatara Ex-Spurs, Real Madrid na Croatian midfielder dị ka onye ọkpụkpọ kacha mma n'ụwa n'afọ ahụ.
Eziokwu #3 - Profaịlụ Nikola Vlasic:
Ọ dị ka ya Paul Pogba - maka ntụnyere. Nikola Vlasic karịrị akarị na mmegharị na nguzozi ya. Dika edere ya na stats ya, o nwere ụdị ịgba ọsọ siri ike, nke ọ na -ejikọ nke ọma na njikwa bọọlụ - nke naanị ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole nwere ike dakọtara.
Eziokwu nke 4 - Okpukpe Nikola Vlasic:
Onye na-agba bọọlụ na-ebuso agha agha bụ nkewa Roman-Catholic nke Iso Ụzọ Kraịst. Ndị otu ezinụlọ Nikola Vlasic na -aga Chọọchị Saint Lawrence dị na Split, Croatia. N'ebe ahụ na ụka ahụ bụ ebe ọ na -eme ememe agbamakwụkwọ ya na nwunye ya ọ hụrụ n'anya, Anna.
Tebụl dị n'okpuru na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara Nikola Vlasic.
Aha n'uju: Nikola Vlašić
aha otutu: Nik
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 4 nke Ọktoba 1997
Age: 24 afọ na ọnwa 1.
Ebe amụrụ onye: Split, Croatia
Ndị nne na nna: Venera Milin (Nne) na Joško Vlašić (Nna)
Ọrụ Nna: Onye nkuzi egwuregwu Croatian na onye bụbu onye na -agbada
Ọrụ Mama: Onye nkuzi mmụta mmega ahụ na onye bụbu onye na-eme ski
Ụmụnne: Blanka Vlasic, Marin Vlasic na Luka Vlasic
Nwunye: Ana Vlašić
elu: 1.78 mita (5 ụkwụ 10 sentimita asatọ)
Ezigbo Net: Nde nde 4 (stats 2021)
Nikola Vlasic bụ akara aka mgbe niile ka ọ bụrụ onye ama ama - ekele niile maka mbọ nna ya (Josko Vlasic) onye malitere ịzụ ya (n'onwe ya) site na nwata. Ịbịa site na ezinụlọ egwuregwu a ma ama nyekwaara ya aka ịtọ ntọala nrọ ya.
Ndị nne na nna Nikola Vlasic bụ ntọala egwuregwu n'ime ezinụlọ. Venera Milin (nne ya), bụ onye nkuzi mmụta mmega ahụ na onye bụbu onye mmeri mba ski. Nna Nikola Vlasic (Joško Vlašić) bụ onye nchịkwa egwuregwu Croatia na onye bụbu onye na -anọchite anya Yugoslavia.
Blanka Vlasic (nwanne ya nwanyị nke tọrọ ya) bụ onye bụbu onye na-eme egwuregwu na onye na-eme egwuregwu, High Jump Legend onye bụ onye mmeri ụwa oge abụọ na onye nrite Olympic ugboro abụọ. Mgbe ọ bụ nwata, Nikola hụrụ (Blanka Vlasic) meriri ụwa ọtụtụ oge - na -eme aha ya na akụkọ ịwụ elu.
Mmetụta nke nna ya, nne ya na ụmụnne ya ndị tọrọ ya nyere ya ike dị ike iji nwee ihe ịga nke ọma n'ụwa nke football ya. Ka m na -ede Bio a, ịrị elu na -enweghị atụ nke Nikola Vlasic ka a na -ahụ na uwe elu West Ham. Otu puku mkpebi ziri ezi agbaala dike ọhụrụ Croatia.
Daalụ maka iwepụta oge iji gwuo Bio a banyere onye ọkpọ na-eto ngwa ngwa. Na Lifebogger, anyị na -eche maka izi ezi nke ọdịnaya anyị Ndị egwuregwu bọọlụ Croatia. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na -adịghị mma na akụkọ ndụ anyị nke Nikola Vlasic.